Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote: Tsy hisy hifidy intsony ireo mpamadika palitao
Depiote: Tsy hisy hifidy intsony ireo mpamadika palitao
Ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena aloha izao no manahirana ny etamazaoro pôlitika eto amintsika, ankehitriny. Rehefa vita izay fifidianana filoham-pirenena izay ka tafapetraka soa aman-tsara ny fitondrana voafidim-bahoaka dia hiroso amin’ny fifidianana solombavam-ahoaka indray ny Malagasy, amin’iny taona 2019. Raha ny Lalàmpanorenan’ny repoblika fahefatra no arahina dia any amin’ny volana aprily na ny volana mey 2019 no tokony hanaovana ny fifidianana solombavambahoaka satria amin’izany fotoana izany no ho tapitra ny fe-potoam-piasan’ireo depiote. Mbola manjavozavo tanteraka hatreto ny mety ho endrika ny Antenimierampirenena vaovao amin’iny taona ho avy iny satria miankina amin’izay ho filoham-pirenena na ny antoko pôlitika ho tonga eo amin’ny fahefana ny ho firafitra ny Antenimierampirenena manaraka. Ny azo antoka zato isan-jato aloha na mbola tsy fantatra aza ny mety ho tontolo pôlitika aorian’ny fifidianana filoham-pirenena, dia tsy hisy hifidy intsony ka tsy ho tafaverina eny Tsimbazaza ireo solombavambahoaka mpamadika palitao izay mieritreritra ny mbola hilatsaka amin’ny fifidianana manaraka. Iza avy moa ireo mpamadika palitao eny Tsimbazaza fa ireo depiote lany tamin’ny anaran’ny antoko hafa saingy lasa mpikambana ao anatin’ny vondrona parlemantera HVM ary miara-dia amin’ny fitondrana mijoro ankehitriny. Tafiditra ao anatin’izany ireo depiote Mapar izay niala tamin’ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina, ary nanangana ny vondrona parlemantera Mapar 2 sy Mapar 3 eo anivon’ny Antenimierampirenena. Tafiditra ao anatiny koa ireo depiote TIM vitsivitsy nivadika tamin-dRavalomanana, toy ny depiote voafidy teny Avaradrano sy Miarinarivo, ireo depiote voafidy tamin’ny anaran’ny vondrona antoko VPM-MMM sy ireo depiote tsy miankina maromaro izay lasa mpanasoaso ny filoha am-perinasa. Sarotra ny inoana fa mbola ho lany ary ho tafaverina eny Tsimbazaza ireto solombavambahoaka mpamadika palitao ireto raha mbola hiltsaka ao amin’ny distrika misy azy, amin’ny fifidianana manaraka. Raha raisina ohatra ny depiote voafidy tetsy amin’ny boriborintany faha 6, Raherisoa Vololona Victorine, dia tsy afaka ny hilatsaka amin’ny anaran’ny antoko Mapar intsony ny tenany fa milatsaka amin’ny anaran’ny HVM na fikambanana tsy miankina. Raha izany anefa ny zavatra hitranga dia azo antoka fa tsy ho lany solombavambahoakan’ny boriborintany faha 6 intsony ramatoa Raherisoa Vololona Victorine. Torak’izany koa ohatra ny depiote John Elite dia tsy hisy hifidy azy intsony ny mponina eny Atsimondrano. Tahaka izay daholo no hahazo an’ireo depiote rehetra namadika palitao satria na ireo olona nifidy azy tamin’ny taona 2013 aza dia efa mahalala daholo fa mpanao pôlitika tsy manana ilay atao hoe “éthique” sy “déontologie”.
Demokrasia diso ny an’ny Hvm
Isan’ny fehezan-teny nahasarika ny fisainan’ny mpanara-baovao maro ny nambaran’ny filohampirenena Rajaonarimampianina tamin’ny talata teo, raha avy nanotrona ny fotoam-panokafana ny fivorian’ny mpikarakara fifidianana ao amin’ny Vondron-tany miteny frantsay teny Antaninarenina izy, ny hoe “vao mianatra demokrasia isika malagasy”.
Izahay tsy hiady hevitra loatra ny amin’izany fa maro ny mpandinika no nahita fa efa hatramin’ny andron’ny mpanjaka no nampihatra ny demokrasia isika teto Madagasikara, tamin’ny alalan’ny “tenimiera” fa tsy nampiasaina fotsiny ilay voambolana hoe “demokrasia” dia toa isika no tratra farany. Efa nisy fiaraha-monina nampanjakana ny demokrasia koa teto, tamin’ny fotoana nitondran’ny Pr Zafy Albert, hoy ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena, fa taty aoriana dia zary nihemotra isika ny amin’izany.
Ny tsy azo ikombonam-bava kosa anefa dia ny fampitahana an’izay tenin’ny filohampirenena Rajaonarimampianina izay amin’ny fihetsika sy ny fepetra raisin’ny mpitondra fanjakana. Ndeha hoekena fa “mbola mianatra ny demokrasia isika”, saingy heverina kosa fa tsy fampianaran-diso no hoekena eto. Fampianaran-diso satria tsy fanajana ny soatoavina demokratika mihitsy ny fampiasan’ny mpitondra fanjakana herim-pamoretana hisakana sy hampihorohoro ny mpisehatra politika, ny firaisamonim-pirenena, hamory vahoaka mba hanazavana ny toe-draharaham-pirenena. Tena fampianaran-diso momba ny Demokrasia koa ny fahasahian’ny fitondram-panjakana manome baiko ny mpanao gazetin’ny haino aman-jerim-panjakana (Rnm-Tvm) tsy mahazo mampiteny ny sokajin’olona ankoatra ireo manao tokim-panompoana ny fitondrana sy ny mpitondra fanjakana. Ny minisitry ny fifandraisana Harry Laurent Rahajason Rolly Mercia dia nahasahy niteny imasom-bahoaka an’io baiko io, volana vitsivitsy lasa izay, tany Vangaindrano sy Farafangana.
Fa mbola fampianaran-diso ny momba ny Demokrasia koa ny finiavan’ny mpitondra fanjakana hanitsakitsaka ny lalàna velona eto amin’ny tany sy ny firenena, ary amin’ny sehatra maro no isehoan’izany. Tena fampianaran-diso ny Demokrasia ny firoboroboan’ny kolikoly avo lenta ataon’ny mpitondra sy tompon’andraikitra ambony isan-karazany, hatrany an-dapa any, satria tsy misy hevitra marina mipoitra intsony, tsy misy fahamarinana misongadina intsony, tsy misy rariny misandratra intsony, rehefa ny vola no manjaka ka anampenana ny mason’ny olon-tsotra sy ny tompon’andraikitra sasany. Isan’ny ibaribarian’izany ny zava-misy eny anivon’ny solombavambahoaka isaky ny misy fanapahan-kevitra lehibe handraisan’izy ireo fepetra toa izao fandinihana sy fankatoavana ny tolo-dalàna momba ny fifidianana izao.
Noho izany, ny mpitondra fanjakana no tompon’andraikitra voalohany tokony hampanaja sy hanaja ny demokrasia nefa rehefa izy no minia manitsakitsaka ampala-dia an’izany dia tsy mendrika hotondroina hoe “mpitondra fanjakana” intsony izy.